Nnukwu mkpagharị na ebubo ọdụ ụgbọ elu ga -akwụsị mgbake njem ikuku
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Nnukwu mkpagharị na ebubo ọdụ ụgbọ elu ga -akwụsị mgbake njem ikuku
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọnụ ego akụrụngwa na -abawanye ijeri $ 2.3 n'oge nsogbu bụ oke iwe, IATA kwuru.
Ịtụba ụgwọ maka ụgwọ site n'ọdụ ụgbọ elu na ndị na -enye ụgbọ elu ikuku (ANSP) ga -emebi njikọta mba ofesi.
Ọdụ ụgbọ elu ekwenyesiri ike na mmụba ụgwọ ANSP eruola ijeri $ 2.3.
N'ozuzu, ANSP nke steeti iri abụọ na itoolu nke Eurocontrol na -achọ inwetaghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 29 (billion 9.3 ijeri) site n'ụgbọ elu iji kpuchie ego ha na -enwetabeghị na 8/2020.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) dọrọ aka na ntị na mmụba e mere atụmatụ ịkwụ ụgwọ site n'ọdụ ụgbọ elu na ndị na -enye ụgbọ elu ikuku (ANSP) ga -akwụsị mgbake na njem ikuku ma mebie njikọ mba ụwa.
Ọdụ ụgbọ elu ekwenyesiri ike na mmụba ụgwọ ANSP eruola ijeri $ 2.3. Mmụba ndị ọzọ nwere ike okpukpu iri ma ọ bụrụ na enyere amụma ndị ọdụ ụgbọ elu tinyegoro na ANSP.
“Ego ijeri $ 2.3 na -abawanye n'oge nsogbu a dị oke egwu. Anyị niile chọrọ ịhapụ COVID-19 n'azụ anyị. Mana ịtụkwasị ibu ego nke nsogbu nke oke apocalyptic n'azụ ndị ahịa gị, naanị n'ihi na ị nwere ike, bụ atụmatụ azụmaahịa nke naanị onye nwere ike ịrọ nrọ. Na opekempe, mbelata ọnụ ahịa - ọ bụghị ụgwọ na -abawanye - ga -abụrịrị isi ihe maka ọdụ ụgbọ elu ọ bụla na ANSP. Ọ bụ maka ndị ọrụ ụgbọ elu ndị ahịa ha, "ka o kwuru Willie Walsh, onye isi ụlọ ọrụ IATA.
A na -ahụ otu ihe atụ n'etiti ndị na -enye ọrụ ikuku ikuku Europe. Na mkpokọta, ANSP nke steeti iri abụọ na itoolu, nke ọtụtụ n'ime ha bụ nke steeti, na -achọ inwetaghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 29 (billion 9.3 ijeri) n'aka ndị na -anya ụgbọ elu iji kpuchie ego ha na -enwetabeghị na 8/2020. Ha chọrọ ime nke a iji nwetaghachi ego ha nwetara. na uru ha tụfuru mgbe ụgbọ elu enweghị ike ife efe n'oge ọrịa. Ọzọkwa, ha chọrọ ime nke a na mgbakwunye na mmụba 2021% ezubere maka 40 naanị.
Ihe omuma ndi ozo gunyere:
Ọdụ ụgbọ elu Heathrow na -akwalite ịbawanye ebubo karịa 90% na 2022.
Ọdụ ụgbọ elu Amsterdam Schiphol na -arịọ ka e bulie ebubo ihe karịrị 40% n'ime afọ atọ na -esote.
Companylọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu South Africa (ACSA) na -arịọ ka etinyere ebubo 38% na 2022.
NavCanada na -abawanye ebubo site na 30% karịa afọ ise.
Etiopia ANSP na -ebuli ebubo 35% na 2021